DHAGEYSI XASAASI AH: M/weynihii hore ee D.F oo kulan xasaasi ah la yeeshay Wasiiro, Xildhibaano & Waxgaradka Beeshiisa, muxuuse kala hadlay? – Puntlandtimes
DHAGEYSI XASAASI AH: M/weynihii hore ee D.F oo kulan xasaasi ah la yeeshay Wasiiro, Xildhibaano & Waxgaradka Beeshiisa, muxuuse kala hadlay?
MUQDISHO(P-TIMES) – Madaxweynihii hore ee dawladda Faderaalka Soomaaliya ahna Mudane katirsan baarlamaanka Xassan Sheekh Maxamuud ayaa kulamo gaar-gaar ah saacadihii u dambeeyey lalahaa Wasiiro, Xildhibaano, Odayaasha dhaqanka ee beesha uu ka soo jeedo, isagoo kala hadlay arrimo xasaasi ah.
Kulamadan oo ka dhacay gurriga Xasan Sheekh maxamuud, waxaa diiradda lagu saaray ammaanka, Siyaasadda iyo doorashada 2020-ka ee Soomaaliya, sidda loogu baahan yahay in waxyaabahan talo guud ay dhinacyadu ka yeeshaan.
Dhinacyadu waxay isku afgarteen in meel looga soo wada jeesto dabeylaha siyaasadeed ee waqtigan socda, loona baahan yahay in maamulka ama deegaanada beesha laga badbaadiyo in ay mar kasta muran iyo daganaansho la`aan siyaasadeed dhexda u taagan yihiin.
HALKAN KA DHAGEYSO WIXII LAGA HADLAY>
Wasiiro & Xildhibaano madasha ka hadlay ayaa aad uga welwelsanaa marxaladda ay maanta kusugan yihiin dawlad gobaleedyada Galmudug & HIRSHABEELLE, waxayna sheegeen in xaaladdaas ay keeni karto in gabi ahaanba ay maamuladaas ku dumaan gacanta dawladda Farmaajo.
Madaxweynihii hore oo dhageyste inta badan ka ahaa kulamadii ugu dambeeyey, ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga shaqeeyo sidii berrito wax looga hagaajin lahaa, ayna waajib tahay in uu qof kasta wixii uu awoodo qabto, si looga gudbo marxaladdaha cakiran ee hadda taagan.